We She Me: ၂၀၁၀ သြစတြေးလျ IT အလုပ် လစာ အညွှန်း
၂၀၁၀ အတွက် သြစတြေးလျက IT Fieldမှ အလုပ်တွေ အတွက် Salary Guide ကို သတင်းတစ်ခုမှာတွေ့လို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ တစ်နှစ်စာ လခကို ၁၀၀၀ ဆ ကိန်းနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အပြည့်အစုံကိုတော့ PDF နဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တခြားဖတ်ရန်- သြော်ဇီက ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ
| FLAGS: Australia , IT
Anonymous - 2/3/10, 12:30 PM
Thanks you ko andy
တောင်ပေါ်သား - 2/3/10, 12:44 PM
အကိုရေ ဘယ်လို တွက်တာတုန်း တချက် ရှင်းပြပေးပါ့လား အဆင်ပြေမယ်ဆို ၁၀၀ ဆိုတာက တနာရီ ကိုပြောတာလား
Andy Myint - 2/3/10, 12:50 PM
တစ်နှစ်စာ လခကို ၁၀၀၀ ဆ ကိန်းနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁၀၀ ဆိုတာ တစ်နှစ်ကို တစ်သိန်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ တစ်သိန်းဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံး စင်္ကာပူမှာ တစ်လ ၄-၅ ထောင် ရတာနဲ့ ညီတယ် ပြောလို့ရပါတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း - 2/3/10, 1:04 PM
Anonymous - 2/3/10, 1:14 PM
ဘာ မှ မလုပ်ဘဲ ၇တဲ့ လစာ လေးဘာ လေး မ၇ှိဘူးလား...........အဟီး
Nge Naing - 2/3/10, 1:29 PM
ကျွန်မက အစိုးရဌာန အောက်က အလုပ်တွေအကြောင်း နည်းနည်း မျှဝေမယ်နော့်။ သြစကြေးလျားမှာ နယူးဆောက်သ်ဝေး ပြည်နယ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်အဆင့် ကျောင်းပြီးပြီး လုပ်ရတဲ့ Professional job အကုန်လုံးက တနှစ်ကို ၄၅ (လေးသောင်းခွဲ) က စပါတယ်။ အစိုးရ ဌာနအောက်က အလုပ်တွေ မှန်သမျှ Position တခုစီကို ၈ (သို့) ၁၀ နှစ်အထိ လစာတိုးပါတယ်။ ၈-၁၀ နှစ်ပြည့်ပြီးရင်တော့ အနှစ်ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်သက်များများ လစာက အတူတူပါပဲ။ ဒါက အခြေခံ အလစာ ဖြစ်ပြီး Weekend, တို့ ညတို့လုပ်ရင်ဈေးက အခြေခံထက် ပိုရပါတယ်။ ဥပမာ တနာရီ ၁၀၀ ရတဲ့သူတယောက်ဟာ စနေနေ့မှာလုပ်ရင် တနာရီ ၁၅၀ ရပြီး၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာလုပ်ရင် တနာရီ ၁၇၅ ကျပ်ရပါတယ်။ ညဘက်လစာကတော့ ပြည်နယ်တခုနဲ့တခု သတ်မှတ်ထားတာ မတူဘူး။
♣♣♣အိမ်မက်ချိူ♣♣♣ - 2/3/10, 1:57 PM
rose of sharon - 2/3/10, 5:56 PM
Anonymous - 2/3/10, 6:24 PM
pls ko andy,could u pls explainalittle bit more as i planned to move to Au next2or3yr. many thanks in advance. How they calculated it?
kozeyar - 2/3/10, 8:38 PM
Thanks so so so much! as I am thinking of migrating there, this is very much useful.
ksanchaung - 2/5/10, 12:20 AM
လစာတွေကို ဖတ်ပြီး သွားရေ တမျှားမျှားနဲ့ ခံစားသွားတယ်။
Anonymous - 2/5/10, 2:02 AM
စီဘောက်မရှိလို့ ဒီမှာ သတင်းပေးခဲ့တယ်နော်...။
ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ စာတွေကို ကူးချပြီး ဘလောဂ့်အကယ်ဒမီ ရမယ်ဆိုရင် ဖြစ်သင့်ပါသလား ။ ဒီလင့်လေးကို သွားဖတ်ကြည့်ပါ။ http://www.blog.moeeaintphyu.net/2010/02/blog-post_02.html
Yu - 2/5/10, 2:52 PM
မင်္ဂလာပါ တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်။ သြစတြေးလျမှာ အလုပ်အကိုင်ရှာချင်တယ်ဆိုရင် နိုင်ငံပြင်ပကနေလျှောက်လို့ ရပါသလား ဒါမှမဟုတ် သြစတြေးလျ ကို အလည်အပတ် visa နဲ့ လာပြီးရှာမယ်ဆိုရင်ပိုလွယ်ကူပါသလားရှင့် ။ ကျွန်မက Software Engineer ပါ၊ လုပ်သက် ၃နှစ်လောက်ရှိပါတယ်။ စကာင်္ပူ ပီအာ ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါရှင်။
Andy Myint - 2/5/10, 3:00 PM
စင်္ကာပူကနေ လျှောက်ပြီး အလုပ်ရသွားတဲ့ အသိတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက် မလွယ်ပါဘူး။ မသေချာပါဘူး။ နောက်တစ်နှစ်လောက် လုပ်သက် ရအောင် ယူပြီး ၄နှစ်ပြည့်တာနဲ့ PR လျှောက်လိုက်ရင်တော့ အသေအချာဆုံးပါပဲ။ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဟာ PR အတွက်IELTS ပြင်ဆင်တာ ဖြေဆိုတာနဲ့ PR လျှောက်ဖို့ Research လုပ်တာနဲ့ ကုန်သွားမှာပါ။
Yu - 2/5/10, 3:02 PM
ဟုတ်ကဲ့။ အခုလိုဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ချန်ချမ်း - 3/3/10, 10:27 PM
ကို Andy, အဲဒီလစာတွေက Take home လား၊ Gross လား၊
Thelay - 3/8/10, 2:00 PM
IT ကျောင်းတွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး.. ဘယ်မြို့မှာ ဘယ်လို စရိတ်ရှိတယ်..living cost လိုမျိုးပေါ့ နောက် မြို့အခြေအနေ နဲ့ မြန်မာ အနည်းအများလေး .. နည်းနည်းလောက် ရေးပေးပါ့လား.
ကျောင်းသုံးခု မှာ ဘယ်ကျောင်းရွေးရမလဲ သိပ်မသိလို့
UNSW, curtin, Monash.
နောက် ကျောင်းပြီးရင် ကော ဘယ်မှာ အလုပ် သက်သာမလဲ လေးပါလေး ကျေးဇူးပြုပြီး ရေးပေးပါ.
Anonymous - 4/4/10, 11:00 PM
ှုIT တွေရဲ့လစာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ Mechanical engineer တွေရဲ့လစာတွေကိုပြောပြပေးပါအုံးဗျာ။
Anonymous - 5/5/10, 11:30 PM
တဆက်တည်း ကျနော်လည်း အိုင်တီ တက်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်ဘာသာက ပိုပြီး ကောင်းလဲ သိရင် အကြံပေးပါဦး။ ဥပမာ ဆွတ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာလား စသည်ဖြင့်ပေါ။ နောက်ပြီးအခက်အခဲလေးတွေလဲ သိချင်ပါတယ်။ ကျနော်က ခမ်ဘာရာမှာနေပါတယ်။
Anonymous - 5/14/10, 3:33 AM
ko Andy pls reply my question if u have free time
i want to know what subject is easy to getajob in australia
i mean in IT feild
then whick university is popular in IT subject
thz for everything
i am looking forward from u
Htet Aung - 7/13/10, 3:04 PM
I reckon University of Technology Sydney is the best for IT in NSW (Sydney). I am doing evening part time IT course there at the moment. If you're interested, let me know. cheers.
Tun - 7/13/10, 7:10 PM
Hi Htet Aung,
I am currently working in sg as software enginner. Please let me know, is thereaschool in AU with cheap school fees which one can survise by working part time and pay the school fees.
Htet Aung - 7/14/10, 11:41 AM
Uni fees are not cheap in AU.. even foralocal student (around AUD $900 per subject) but if you could secure software engineer position with good pay here, you'll be all right. Central Queensland University and Charles Stunt University areabit cheaper than other popular universities like UTS, UNSW. I am not sure about uni in other states as I am from Sydney. If you work only part time, I highly doubt that you can pay the school fees unless you are from the rich ass military family. Apparently international students are not allowed to work more than 20Hrs per week. AU is ripping International students off. So I reckon you should try to apply PR or get job first. anyway all the best.
Burmese - 7/14/10, 12:18 PM
Hi Ko Htet Aung,
Thank for your quick reply. Can I have your gtalk account? or you add me my account? saithihatun@gmail.com. I have more query about AU.
Anonymous - 7/18/10, 10:53 PM
One way to save tuition fees to complete
NCC higher (IHDCS) or City and Guilds in
Yangon then apply to universities in Ozi.
So you can get into 2nd or final year in
Ozi univ and save money.
Anonymous - 6/13/11, 4:35 AM
Thank you very much for the info. How is the mobile application development in Aussie? Is thereamarket for mobile app developers? If yes, which is more popular - andriod or iOS? I've some years of .NET (web applications and webservice) andayear of iPhone app development experience. I'm currently working as software developer in SG. I'm quite indecisive about wither to continue with the mobile platform or go back to .NET. As I wish to migrate to Aussie, I'd like to gain suitable experience that should help me getajob in Aussie.
Thanks in advance for your kind reply. Haveanice day :)
Hsann Naing - 11/8/13, 1:25 AM
Ma Andy .. အေး ယောင်လို့
Personally I really like some post on your blog, many thanks for your time and post.